Gbasara Anyị - Ilọ ọrụ igwe na-akpụ akpụ MEIXIN
Meixin Comb Brush Making Machine Emeputa, companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ dị elu e guzobere na 2004.We bụ ọkachamara na nyocha, mmepe na nrụpụta nke 2-5 axis single (okpukpu abụọ) igwe na-arụ ọrụ nchacha ahịhịa, CNC olulu na tufting igwe, CNC igwe na –eme ihe n ’isi mposi, igwe na - eme brọsh ahịhịa, igwe na - eme brọsh ahịhịa na igwe na - ete ihe, na ihe ndị ọzọ. Ngwaahịa anyị ka etinyere n’ọrụ dị iche iche kwa ụbọchị, ahịhịa ezé elektrik, ahịhịa ezé ezumike, ihe ịchọ mma, brushes, ntu ahịhịa, nku anya agba, ntutu isi usoro, ntutu isi gburugburu, ahịhịa ahịhịa, ahịhịa ntutu, ahịhịa ahịhịa, BBQ waya ahịhịa, nhicha eletriki nhicha nhicha, nhicha eletriki nhicha ọkụ. Anyị nwere ike ịme igwe dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Anyi nwere otu ndi otu ndi okacha amara nke nwere mmuta.
Ha dị njikere ịchepụta ma rụpụta ngwaahịa na ọkwa na ahaziri ahazi.Ma, anyị nwere ụba ahịhịa tufting igwe nhazi teknụzụ, arụmọrụ siri ike, anyị na-emezi usoro ọrụ.
Ngwaọrụ ahịhịa na-emepụta ahịhịa na Broom
Mpempe igwe na-akpụ akpụ nke MEIXIN rụpụtara PZ-22
Ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa niile, gụnyere India, Vietnamese, Venezuela, mpaghara Taiwan, South America na ndị ọzọ. N'ime afọ ole na ole gara aga, ebumnuche anyị nke mbụ bụ ọrụ ndị ahịa na ndị ahịa afọ ojuju. Anyị emeela ọtụtụ ihe iji bulie ọkwa dị mma ma gbalịsie ike igosipụta njikwa njikwa na njikwa mara mma.
Ngwunye ụlọ mposi hockey nke MEIXIN rụpụtara PZ-16
Ngwaahịa anyị na-ekpuchi igwe dị iche iche ma ama ewu ewu n'etiti ndị ahịa nwere ngosipụta ihuenyo komputa, bọl TBI dị mma batara ịghasa na ụzọ kwụ ọtọ duziri okporo ụzọ, servo moto, Italy brake moto na na.Mapụrịrị ngwaahịa anyị ga-enwerịrị 100% iji hụ na ha arụmọrụ, ntụkwasị obi, nchekwa na ịdịte ndụ tupu ebufe.
Plastic oghere olulu tufting na-eme igwe
Na mbido 2017, igwe mbu nke ahịhịa ahịhịa sitere n’aka ndị ahịa Pakistan anyị achịkwala nke ọma. Ọ na-aga njem Ihe ngwugwu a siri ike dika esere esere ndi a na-egosi ikwe nkwa nchekwa igwe.
You nwere ajụjụ?
Meixin ọkachamara mepụtara igwe na-arụ ọrụ, ị tụkwasịrị anyị obi, anyị na-ejere gị ozi.